ကုန်ကြမ်း Phenylpiracetam အမှုန့် (77472-70-9) ထုတ်လုပ်သူ - Phcoker
SKU: 77472-70-9 အမျိုးအစား: စမတ်မူးယစ်ဆေး
ကုန်ကြမ်း Phenylpiracetam အမှုန့် (77472-70-9) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Phenylpiracetam အမှုန့် (77472-70-9) ဖျေါပွခကျြ
ကုန်ကြမ်း Phenylpiracetam အမှုန့်ဒါဟာအစစိတ်ဓါတ်များ, မှတ်ဉာဏ်, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ပင်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခြင်းငှါတစ်အစွမ်းထက်လှုံ့ဆော်ရဲ့အစွမ်းထက် racetam nootropic ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Phenylpiracetam အမှုန့်ရဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံပူးတွဲတစ်ဦးအပိုဆောင်း phenyl အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူ piracetam အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ phenyl အုပ်စုတစ်စုကုန်ကြမ်း Phenylpiracetam အမှုန့် piracetam ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်သည်နှင့်ကသွေးသည်ဦးနှောက်ဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်အလှည့်အတွက် body.This အိမ်ခြံမြေအတွင်းတွင်၎င်း၏စုပ်ယူမြှင့်တင်ရန်ရသောအဆီ, ဆီနှင့် lipids ထဲတွင်ပျော်ဝင်မှကုန်ကြမ်း Phenylpiracetam အမှုန့်ရဲ့စွမ်းရည်, ရှင်းပြခြင်းငှါတိုးပွါး အတားအဆီးပိုပြီးအလွယ်တကူနဲ့ထိထိရောက်ရောက်။
ကုန်ကြမ်း Phenylpiracetam အမှုန့် AMPA receptors ကိုနှိုးဆွခြင်းအားဖြင့် excitatory neurotransmitter အချိုမှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်တစ်ဦး ampakine အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်တိုးတက်လာသောသိမြင် function ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်မှတ်ဉာဏ်, အာရုံနှင့်ခြုံငုံသိမှတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရန်ကုန်ကြမ်း Phenylpiracetam အမှုန့်ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။
ကုန်ကြမ်း Phenylpiracetam အမှုန့် (77472-70-9) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Phenylpiracetam အမှုန့်
ဓာတုအမည် 4-Phenyl-2-pyrrolidone-1-acetamide; 2- (2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl) acetamide; 4-Raw Phenylpiracetam အမှုန့်
အမှတ်တံဆိပ် NAmE Phenotropil; Carphedon
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား Nootropic (ဂါဘမြို့သားဆင်းသက်လာ)
InChIKey LYONXVJRBWWGQO-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C12H14N2O2
မော်လီကျူး Wရှစ် 218.25g / mol
အရည်ပျော် Point 126-128oC
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ 2-3 နာရီ
Solubility PBS ခုနှစ်, သော pH 7.2, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 / ml ကို mg ဖြစ်ပါတယ်။
Application ခံစားချက်, မှတ်ဉာဏ်, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ပင်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေပါ။
Phenylpiracetam neuro အကာအကွယ်ဆေးဝါးအုပ်စုပိုင်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်အမေရိကနှင့်ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်, phenylpiracetam အမှုန့်ကျယ်ပြန့်မှတ်ဉာဏ်, အာရုံ, ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံမြှင့်တင်ရန်အများအပြားအားဖြင့်ယုံကြည်သည်တစ် nootropic အဖြစ် Off-တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုသည်။
Phenylpiracetam 1983 အတွက်သိပ္ပံရုရှားအကယ်ဒမီမှာဖွံ့ဖြိုးပြီး piracetam တစ်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတိုးချဲ့အာကာသပေါ်အာကာသယာဉ်မှူးများကကြုံတွေ့သည့်အချိန်ကြာမြင့်စွာစိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်ကုသမှုအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့ missions.
phenylpiracetam အမှုန့်အပေါ်လူ့သုတေသနရုရှားလေ့လာမှုများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကန့်သတ်သော်လည်း, က Post-လေဖြတ်လူနာမှအာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်နေ့စဉ်လူနေမှုလှုပ်ရှားမှုများ restore ကူညီခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, စိုးရိမ်ပူပန်ပြလျက်ရှိသည်နှင့်သိမြင်မှု function ကိုအော်ဂဲနစ်ဦးနှောက်နှင့်အတူလူနာအတွက် lesions.
Phenylpiracetam အမှုန့် (77472-70-9လှုပ်ရှားမှု၏) ယန္တရား
ဦးနှောက်အတွက်, phenylpiracetam အမျိုးမျိုးသော neurotransmitters များ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ပါဝင်အရှိဆုံးအရာ၏လုပ်ဆောင်ချက်အများအပြားယန္တရားများ, ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ AMPA receptors ကိုနှိုးဆွခြင်းအားဖြင့် excitatory neurotransmitter အချိုမှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်တစ်ဦး ampakine အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်တိုးတက်လာသောသိမြင် function ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်မှတ်ဉာဏ်, အာရုံနှင့်ခြုံငုံသိမှတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရန် phenylpiracetam ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ dopaminergic system ကိုသက်ဝင်အားဖြင့်၎င်း, Dopamine inhibitor. တစ် dopamine reuptake အဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှု, မှတ်ဉာဏ်, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအရေးပါသော neurotransmitter ဖြစ်ပါသည်, phenylpiracetam အမှုန့်ကိုလည်း extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးကြောင်းပြ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများ။ တိုးမြှင့် dopamine အဆင့်ဆင့်လှုံ့ဆျောမှု, ခံစားချက်နှင့်အာရုံအပေါ် phenylpiracetam ရဲ့အပြုသဘောသက်ရောက်မှုများအတွက်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်တာဝန်ယူဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Dopamine လည်းသွေးထဲတွင်နှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအားများနှင့်အဆီနဲ့သကြား၏အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးသော stimulatory neurotransmitter norepinephrine ၏တိုက်ရိုက်ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှု phenylpiracetam ရဲ့စွမ်းအင်နှင့်လုံတိုးမြှင်စွမ်းရည်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။
အခြားအ racetam-type အမျိုးအစား nootropics ကဲ့သို့ပင် phenylpiracetam လည်းဒါနီးကပ်စွာသိမှတ်ခံစားမှုအပေါငျးတို့သရှုထောင့်နှင့်ဆက်စပ်သည်ကို ထောက်. "ဟုအဆိုပါသင်ယူမှု neurotransmitter" အဖြစ်ရည်ညွှန်းတစ်ခါတစ်ရံ, acetylcholine ထုတ်လုပ်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် acetylcholine ထုတ်လုပ်ရန် choline ကိုအသုံးပြုသည်နှင့် racetams ယူပြီးတဲ့အခါမှာအလျင်အမြန်ဖြည့်စွက် choline ယေဘုယျအား phenylpiracetam နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့အကြံပြုအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်၎င်း၏စတိုးဆိုင်ပျက်ဆီးလိမ့်မည်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား of Phenylpiracetam အမှုန့် (77472-70-9)
အကြံပြုထားသည် Phenylpiracetam အမှုန့် (77472-70-9) သောက်သုံးသော
အဆိုပါ phenylpiracetam သောက်သုံးသောလိုအပ်ချက်များနှင့်လေ့လာမှုများပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်, ထို 200mg -600mg ထံမှသောက်သုံးသောအကွာအဝေးအကြံပြု
သောက်သုံးသော 200mg (100mg နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်) 600mg (သုံးကြိမ်နေ့စဉ် 200mg) မှတက်
ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီ MG ယေဘုယျအား 100 ၏, နှစ်ဦးစလုံးတက်ဘလက်များနှင့်အမှုန့်ပုံစံကိုရောင်းချသည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး of Phenylpiracetam အမှုန့် (77472-70-9)
အဆိုပါ racetam လူတန်းစားအခြား nootropics ကဲ့သို့ပင်အနည်းငယ်အစီရင်ခံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအကြံပြုထားတဲ့ဆေးညွှန်းမှာ phenylpiracetam ဖြည့်စွက်ခြင်းမှရှိပါသည်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ acetylcholine ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Phenylpiracetam ခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ Alpha GPC သို့မဟုတ် CDP-Choline တူသော Choline ဖြည့်စွက်သင်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ဒေါသထွက်စေပြီးဦးနှောက်အပါအဝင်မနှစ်မြို့ဖွယ်သက်ရောက်မှု phenylpiracetam ယူပြီးပြီးနောက်နေ့, သတင်းပို့ fog.
အခြားသူများကစိတ်ကျရောဂါတစ်ခုကြာရှည်ကာလအတွင်းစဉ်ဆက်မပြတ် phenylpiracetam မြင့်မားဆေးများကိုယူပြီးအခက်အခဲအိပ်ပျော်နေသောမှုနိုငျကွောငျးဆိုသညျကား, နှင့်စိတ်ခံစားမှု instability.
Nootropics Phenylpiracetam: အကျိုးကျေးဇူးများ + အန္တရာယ် + stack 丨 Phcoker
Zhilyuk, VI ကို, Levykh, AE, & Mamchur, VI ကို (2014) ။ နာတာရှည် Hyperglycemia နှင့်အတူသည်အထိအတွက် Pyrrolidone အနကျအဓိပ်ပါယျ၏ Antiaggregant လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ယန္တရားများ၏လေ့လာမှု။ စမ်းသပ်ဆဲဇီဝဗေဒနှင့်ဆေးပညာစာစောင်, 156(6), 799 ။
Rekis, တီ, Berzins, အေ, Orola, အယ်လ်, Holczbauer, တီ, actin, အေ, Seidel-Morgenstern, အေ, & Lorenz, အိပ်ချ် (2017) ။ phenylpiracetam ၏အစိုင်အခဲဖြေရှင်းချက်: centrosymmetric အာကာသအုပ်စုများအတွက် crystallize မှလူပျို enantiomer ရဲ့တိုက်တွန်းကြသည်။ crystal ကြီးထွား & ဒီဇိုင်း, 17(3), 1411-1418 ။
blank, RH အ (2016) ။ သိမှုစွမ်းရည်မြှင့်ဖို့နိဒါန်း။ တွင် သိမှုစွမ်းရည်မြှင့်: လူမှုရေးနှင့်ပြည်သူ့ပေါ်လစီကိစ္စများ(စစ။ 1-41) ။ Palgrave အေ, လန်ဒန်။
Szulc, BR (2015) ။ glutamatergic ဂီယာနှင့် Synaptic plasticity အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု: အ putative သိမြင် Enhancer BRS-015 ၏ပေါင်းစပ်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု(ပါရဂူစာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း, UCL (University College London မှ) ။